‘बक्सअफिस’ जरुरी छ :: राजकुमार राई (अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड) « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
‘बक्सअफिस’ जरुरी छ :: राजकुमार राई (अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड)
२८ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०२:४७ मा प्रकाशित
पाँच महिना लामो अन्योल र अनेक चर्चा–परिचर्चापछि अन्ततः चलचित्र विकास बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ । पुराना चलचित्रकर्मी राजकुमार राईको नियुक्तिसँगै चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ उत्साह पनि थपिएको चलचित्रकर्मीहरू बताउँछन् । चलचित्र निर्माता सङ्घमा अध्यक्षसमेत रहेका नवनियुक्त बोर्डअध्यक्ष राईले आफू अब नितान्त रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चलचित्र क्षेत्रलाई राम्रैसँग बुझेको दाबी गर्ने राजकुमार राईसँग गरिएको कुराकानीको सार :
० अन्ततः जित तपार्इंकै भयो हो कि ?
– यसमा जित–हारको कुरा छैन । मलाई सरकारले उपयुक्त ठान्यो र नियुक्त गरिएँ । चलचित्र विकास बोर्ड कुनै प्रतियोगिता हुने स्थान होइन, जहाँ जित र हारको कुरा हुन्छ ।
० तर, अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि अरूको पनि त नाम आएको थियो नि ?
– त्यो त मलाई थाहा भएन । मैले यस विषयमा कुनै चियोचर्चा गरेर पनि हिँडिनँ ।
० तपाईंलाई बोर्डको अध्यक्ष हुन नदिन निकै चलखेल भएको थियो भनिन्छ त ?
– भयो होला, तर सबै परास्त भए । यहाँ आफू के गर्ने भन्ने भन्दा पनि अरू के गर्दै छ भन्नेतिर ध्यान बढी दिने गरिन्छ । त्यसकारणले पनि हामी हाम्रो कर्म र उद्देश्यमा असफल भइरहेका छौँ ।
० चलचित्र विकास बोर्डमा त्यस्तो के आकर्षण छ र गैरचलचित्रकर्मीहरू पनि यो बोर्डतिर आकर्षित भइरहेका छन् ?
– मैले पनि त्यो कुरा बुझिरहेको छैन । जब कि बोर्डको नीतिमा नै अध्यक्ष चलचिकर्मीबाटै हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, यहाँ गैरचलचित्रकर्मीहरू पनि हावी हुन खोजिरहेका छन् । मेरो नियुक्तिले फेरि एकपटक विशुद्ध रूपमा एउटा चलचित्रकर्मीले सम्मान पाएको छ र सरकारले बोर्ड केवल चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि गठन भएको हो र बोर्डमा चलचित्रकर्मी नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा सञ्चारमन्त्रीज्यूले पनि प्रमाणित गरिदिनुभएको छ ।
० अब के छ नि तपाईंको योजना… ?
– म पहिलेदेखि नै नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लाग्दै आएको छु । अब पनि मेरो धर्म यही हो । अब चर्चामा रहेको र चलचित्रकर्मीको पक्षमा रहेको बक्सअफिसलाई अगाडि बढाउँछु ।
० तर फिल्म क्षेत्रमा त बक्सअफिसको विरोध भएको छ नि, होइन र ?
– यो त कुरा नबुझ्नेहरूले विरोध गरेका हुन् । विवादरहित हिसाबकिताब राख्न सकिने र चलचित्रकर्मीहरूको लगानी बच्ने बक्सअफिस यतिबेला आवश्यक छ । फटाहाहरू र अरू लगानीको खान पल्केकाहरूले मात्र यसको विरोध गरेका हुन् । विशुद्ध चलचित्र निर्माताहरू यसको विरुद्धमा छैनन् र जो विरुद्धमा छन् उहाँहरूले पनि बक्सअफिसको महत्व बुझेपछि यसको समर्थन गर्नुहुनेछ ।
० अनि चलचित्र निर्माणतिर तपाईंको योजना ?
– पहिला त म चलचित्र निर्माता नै हो । त्यसैले चलचित्र निर्माणलाई निरन्तरता दिन्छु र चलचित्र निर्माणलाई सरलीकरण बनाउनतिर सबैको राय–सुझावलाई समेटेर अगाडि बढ्नेछु ।